Resaky ny mpitsimpona akotry : diso fanantenana | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : diso fanantenana
Na ny filazana hoe « rahatrizay tapitra ny ala atsinanana » aza, dia efa nihoaran’ny toe-javatra miseho. Ny fitenenana an’izany teo aloha moa dia fiheverana fa tsy hitranga mihitsy ny fahataperan’iny ala ravaka sady harenan’ny nosy iny noho ny fahaizana mitantanana. Iza intsony no sahy hanentitrentritra fa tsy ho fongana iny ala iny ary na tsy mangadihady toy ny loha sola aza dia efa tsy miroborobo intsony ny solofo dimbin’ny ala. Toy izany koa raha toa ny mananontanona ny hoavin’ny harena an-kibon’ny tany raha tsy hentitra dia hentitra ny fampiharana ny fifehezana mikasika ny fitrandrahana ny harena ankibon’ny tany.
Ity fandripahana antsokosoko ny alan’andramena ity moa no atao resabe, zava-doza io nefa tsy hain’ny tompon’andraikitra ny maka fepetra handravana io tambajotra fahavalom-pirenena io. Misy milaza fa taizaina mihitsy ny fisian’io tantara maloto io ho tako-maso fisarihana ny saim-bahoaka, fandrebirebena tsy itodihany hitazana ny fandrobana ny harena sasany amin’ny fitrandrahana na ara-dalàna na tsia izay rehefa tena alalinina dia samy fanao tsy mitondra tombony ho an’ny firenena ary tsy ahazo ny anjarany koa ny vahoaka.
Mikororosy tsikelikely moa amin’izao fotoana izao ny vidin’ireo metaly isan-karazany an-kibon’ny tany. Izany fitrangan-javatra izany dia mampihena ny tombombarotry ny nosy, tobombarotra inona moa araky ny voateny tetsy aloha, olom-bitsy angamba no nisy nitavana tamin’ny fanaovana ny fifanaikena tetsy sy teroa. Na ny volamena aza dia manidina any ivelany, ireny tratra ireny nampiakarina an-tsokosoko anaty fiaramanidina dia ampahany kely amin’ireo vokatra manjavona aman-taonina.
Tsy menatra moa ireo mpanefoefo amin’ny fampideraderana ny fitombon’ny harenany tampotampoka, izay tsy miafina ho an’ny fiarahamonina fa vokatry ny fanondranana andramena, ny fanjakana irery ihany no jamba tsy sahy manadinkadina mikasika ny harena tsy fanta-piaviana.
Mbola ho avy tsy ho ela koa ny fahadisoam-panantenana mikasika ny harena ao ankibon’ny tany. Rehefa ritra izay vao samy hitolagaga toy ny tamin’ny nahafongana ny ala atsinanana. Tsy resahana intsony, lasa tantara angamba izany hoe Madagasikara nifono harena izany, sy ny vahoaka nitafy gony nanitsaka tany nitoerana volamena sy zava-tsarobidy isan-karazany.